Sonoran मरुभूमि | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | संयुक्त राज्य अमेरिका, मार्गदर्शकहरू
तिमीलाई मन पर्र्यो मरुभूमि? सबै महादेश मा धेरै छन् र उत्तर अमेरिकामा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक सोनोरन मरुभूमि हो। यो संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि मेक्सिकोसम्म फैलिएको छ, त्यसैले यो दुई देशहरू बीचको प्राकृतिक सीमा मध्ये एक हिस्सा हो।
मरुभूमिहरू विशेष हुन्, उनीहरूको जीव जन्तुहरू, वनस्पतिहरू, आफ्नै संस्कृति। दिनको समयमा तिनीहरू कहिलेकाँही विनाशकारी हुन्छन् र राती तिनीहरू अँध्यारो र तारा-स्टडेड आसमानमा खुल्छन्, जसले तिनीहरूलाई पार गर्ने सबैलाई निम्त्याउँछ ब्रह्माण्डमा सानो महसुस गर्न। आज, Sonoran मरूभूमिमा पर्यटन.
1 Sonoran मरुभूमि
2 Sonoran मरूभूमिमा पर्यटन
हामीले भनेजस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिका र मेक्सिको बीचको सीमामा छ, दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका मा, एरिजोना र क्यालिफोर्निया मा। मेक्सिकन पक्षमा, यो सबैको चल्ती मरुभूमि हो र कुल ओगट्छ २260० हजार वर्ग किलोमीटर.
मरुभूमि क्यालिफोर्नियाको खाडीको उत्तरी छेउमा छ। पश्चिममा यसलाई प्रायद्वीपीय माउन्टेन रेन्जले घेरिएको छ, जसले यसलाई क्यालिफोर्नियाको दलदलबाट उत्तरमा अलग गर्दछ, यो चिसो इलाकामा परिणत हुन्छ र महत्वपूर्ण उचाइका साथ। पूर्व र दक्षिणपूर्वमा यो कोनिफर र फलानहरूसहित दक्षिणमा सुक्खा उपोष्णकटिबंधीय जंगलमा आबद्ध हुन थाल्छ।
यो मरुभूमिमा अनौठो बोटबिरुवा र पशुहरू बस्छन्: उभयचर २० प्रजातिहरू, सरीसृपहरूको १००, माछाको 20०, चराहरूको 100 30० प्रजाति, माहुरीको १,००० र बोटका करिब २,००० प्रजातिहरू ... यहाँ सम्म कि मेक्सिकोको सिमाना नजिकै, त्यहाँ धेरै जगुआरहरू छन्, संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक मात्र।
सत्य यो छ कि उजाडस्थानमा त्यहाँ धेरै राष्ट्रिय पार्क र स्मारकहरू छन्दुवै राष्ट्रिय र राज्य, वन्यजन्तु भण्डार र अभयारण्यत्यसोभए, यदि तपाईंलाई यी परिदृश्यहरू मनपर्दछ भने त्यहाँ जानकारी प्राप्त गर्न धेरै रोचक स्थानहरू छन्।
के मानिसहरू सोनोरन मरुभूमिमा बस्छन्? हो, ऊ सँधै आएको छ विभिन्न संस्कृतिहरूको घर। आज पनि यो क्यालिफोर्निया र एरिजोनामा वितरण गरिएको विशेष आरक्षणमा करीव १ N मूल निवासी अमेरिकीहरूले बसोबास गरिरहेका छन, तर मेक्सिकोमा पनि। मरुभूमिको सबैभन्दा ठूलो शहर एरिजोनामा फिनिक्स होनुन नदीमा with० लाख भन्दा बढी बासिन्दाहरूको साथ।
अर्को ठूलो शहर पनि चिनिन्छ, टक्सन, दक्षिणी एरिजोनामा, करीव एक मिलियन बासिन्दाहरू सहित, र बाजा क्यालिफोर्नियामा मेक्सिकल।
Sonoran मरूभूमिमा पर्यटन
तिनीहरू भन्छन् कि यो मरुभूमिले पहिलो पटक भ्रमण गर्नेहरूलाई आश्चर्यचकित गर्दछ। सुख्खा, विशाल र एकदमै चाखलाग्दो व्यक्तिहरूको लागि जो महान आउटडोरमा पैदल, बाइकमा, कार द्वारा खोजी गर्दछन्। हो वास्तवमा, केहि नेभिगेसन प्रणाली बिना अन्वेषण हुन सक्दैन किनभने तपाईं सजिलै हराउन सक्नुहुन्छ र ... ठीक छ, नराम्रो समय छ। यो सोच्नुहोस् कि मोबाइलले सबै कुराको समाधान गर्दछ, आराम नगरी कागजको नक्शा पाउँदा यसले चोट पुर्‍याउँदैन किनकि यसले ब्याट्री छोड्दैन वा सिग्नल हराउँदछ, मरुभूमिमा केही सामान्य कुरा।
एक GPS उपकरणको अलावा पानी ल्याउनु पर्छ र प्रति घण्टा लिटर, र खाना पिउन प्रतिबद्ध छ। लुगाफाटा पनि महत्त्वपूर्ण चीज हो किनभने मौसम चरम छ: यो धेरै तातो वा धेरै चिसो हुन सक्छ, वर्ष को समय वा तपाईंले गर्न रोज्नुभएको साहसिक कार्यमा निर्भर गर्दै, तपाईंलाई पर्वत, घाटीहरूमा लैजान्छ।
El Sonoran मरूभूमि राष्ट्रिय स्मारक यो जनवरी २००१ मा अध्यक्ष क्लिन्टनको नेतृत्वमा सम्पूर्ण क्षेत्र र यसको इकोसिस्टम रक्षाको लागि स्थापित भएको थियो। सत्य यो हो कि यो एक बाट हो जैव विविधता जबरदस्त: पहाडी दायराहरू देखि विस्तृत उपत्यकाबाट अलग गरिएको सागुआरो क्याक्टस जंगलहरू, यहाँको खास। वनस्पति र जीव जन्तुको साथसाथ, संरक्षित क्षेत्र पनि छ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक साइटहरू।
त्यहाँ छन् गुफा चित्रहरु संग चट्टानहरु, खदानहरू जहाँ प्रागैतिहासिक कलाकृतिहरू फेला परेको छ, स्थायी बस्ती को अवशेष, वर्तमान मूल मानिसहरु र पुरानो अवशेषको पालना ऐतिहासिक मार्गहरू मोर्मन बटालियन ट्रेल जस्तै जुआन बाउटिस्टा डि अन्जा राष्ट्रिय ऐतिहासिक ट्रेल वा बटरफील्ड ओभरल्याण्ड स्टेज रुट ...
यस बीच पार्क भित्र रुचि साइटहरु हामी केहि बारेमा कुरा गर्न सक्छौं। उदाहरण को लागी, उहाँलाई Saguaro राष्ट्रीय पार्क। सागुआरो एक हो दुर्लभ क्याक्टस त्यो कहिलेकाँही मानव रूप लिन्छ। यो क्षेत्रमा अनौंठो छ र ठुलो उचाइमा पुग्न सक्दछ कि यो हाल सुरक्षित प्रजाति हो। पार्कमा दुई जोनहरू छन्, पूर्व र पश्चिम, र तिनीहरू सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म खुला छन्, क्रिसमसको दिन बाहेक। दुबै क्षेत्रहरूमा आगन्तुक केन्द्रहरू छन् र पैदल वा बाइकबाट प्रवेश गर्न यसको लागत $ costs छ।
अर्को चाखलाग्दो साइट हो अंग पाइप क्याक्टस राष्ट्रिय स्मारक। यो वन्य, हिमाली पार्क हो, बोटबिरुवाहरूको सुन्दर संग्रहको साथ जहाँ अंग पाइप क्याक्टस तारा, The हो देशको सब भन्दा अग्लो क्याक्टस। त्यहाँ एक आगन्तुक केन्द्र छ, जो केवल संघीय बिदामा बन्द छ। यो फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिलमा उच्च मौसम हो। त्यहाँ पनि छ ताल हावासु स्टेट पार्क, कोलोराडो नदीमा बाँधहरू द्वारा निर्मित सबैभन्दा लोकप्रिय तालहरू मध्ये एक।
यो ताल यसको लागि परिचित छ लन्डन पुल, जहाँबाट दृश्य परिदृश्य गरिएको छ, अधिक किनकि यो एक अंग्रेजी गाउँ तिर हेर्दछ Tudor भवनहरू सहित। यो एकदम सुरम्य छ। ताल Havasu शहर पार्कर बाँध को निर्माण पछि जन्मेको थियो र एक शहर हो कि धेरै चीज प्रदान गर्दछ। तपाईं पनि धेरै गर्न सक्नुहुन्छ वाटरस्पोर्टहरू र सबै वर्ष पर्यटक आकर्षित गर्दछ। तपाईं डुating्गा जान जान सक्नुहुन्छ, माछा मार्न जान र गतिविधिहरू गर्न सक्नुहुन्छ बाहिर। वरपरका ठाउँहरू छन् ऐतिहासिक खानाहरू, परित्याग गरिएका गाउँहरू, भू-भौगोलिक महत्त्वको ट्रेल्स...
El क्याचर काभर्नस स्टेट पार्क १ 70 s० को दशकमा भेटिएको Katchner Caverns मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। एक हो विशाल गुफा, दुई कोठाको साथ फुटबल फिल्डको आकार, र आज यो एक यात्रा पछि अन्वेषण गर्न सकिन्छ कि तपाईं यसको आन्तरिक बहुरंगी सुन्दरताको मूल्यांकन गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। यो साइट प्रत्येक दिन बिहान 7० देखि साँझ 30 सम्म खुल्ला हुन्छ र टुर्स प्रत्येक २० मिनेटमा छुट्छ। यो क्रिसमसमा मात्र बन्द हुन्छ।
El पिको पिकाचो स्टेट पार्क यो दक्षिणी एरिजोनामा अन्तर्राष्ट्रिय १० मा छ र यससँग धेरै अग्लो पहाड छ। त्यहाँ छन् प्रेषक जसले तपाईंलाई परिदृश्यको सौन्दर्यको मूल्यांकन गर्न अनुमति दिन्छ र जंगली फूलहरूको लागि वसन्तमा यो गर्न उत्तम हुन्छ। यो एउटा पाल र एक शिविर क्षेत्र, एक पिकनिक क्षेत्र संग एक आगन्तुक केन्द्र छ ... यहाँ, अमेरिकी गृहयुद्धको समयमा, Paso Picacho को लडाई भयो र प्रत्येक वर्ष, मार्च मा, ऐतिहासिक युद्ध को एक reenactment छ।
यहाँ Sonoran मरूभूमि मा ऐतिहासिक साइटहरु को कुरा गर्दा अर्को आकर्षण हो युमा टेरिटोरियल जेल, संयुक्त राष्ट्र पुरानो पश्चिम को जीवित संग्रहालय। Operation,००० भन्दा बढी अपराधीहरू यहाँ बिते, operation operation बर्षको जेलको चलखेलमा, 1876 y 1909 प्रविष्टि गर्नुहोस्। गार्ड टावर र एडोब कक्षहरू धेरै राम्ररी संरक्षित छन् त्यसैले भ्रमण रोचक छ। यो साइट एरिजोनामा हो र तपाई यो जान्न सक्नुहुनेछ यदि तपाई युमा क्षेत्र चिन्ने निर्णय गर्नु भयो भने।
जेल सोनोरन मरुभूमिको मुटुमा छ र क्षेत्र देशको सबैभन्दा सुन्नी स्थान हो त्यसैले यो एकदम तातो छ… तर यो रोचक छ यदि तपाईंलाई ओल्ड वेस्टको इतिहास मनपर्‍यो भने। यदि हो भने, भ्रमण गर्नुहोस् यूमा क्रसिंग ऐतिहासिक पार्क यसको पुराना भवनहरू र यातायातको साधनको साथ, त्यस समयका साक्षीहरू।
अन्तमा, हामीसँग छ एरिजोना मरुभूमि संग्रहालय - Sonora। एक हो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, एक चिडियाखाना, र बोटानिकल बगैचाको संयोजन। त्यहाँ जीवित जनावरहरू, आफ्नै क्षेत्रहरूमा बस्ने, र मरुभूमिमा जानको लागि पाँच किलोमिटर ट्रेल्स जस्तो केहि ब्यबहारिक प्रदर्शनहरू छन्। ल्याण्डस्केपहरू सुन्दर छन् र भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय सेप्टेम्बरदेखि अक्टुबर हो, जुन मौसम नरम छ।
संग्रहालयका केही सेक्सनहरू छन्: क्याक्टस गार्डन, हमिंगबर्ड एविएरी, क्याट क्यान्यन, सरीसृप र इन्भर्टेब्रेट क्षेत्र, गुफाहरू र तिनीहरूका खनिज ... त्यहाँ अन्वेषण गर्न धेरै सेक्सनहरू छन् र प्रत्येकले अद्भुत परिदृश्य प्रस्ताव गर्दछ। यो एउटा प्राकृतिक ओएसिस।
अहिलेसम्म सोनोरन मरुभूमिले हाम्रो लागि स्टोरमा के एक नमूना बनायो। यदि यी परिदृश्यहरू तपाईंको चीज हो भने, सत्य यो हो यो गन्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिकामा नछुटाउनु हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » संयुक्त राज्य अमेरिका » Sonoran मरूभूमि
पोर्टो डे सान्ता मारिया, क्याडिज